Gulufka ku wajahan Guriceel oo gaabis uu ka muuqdo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Gulufka ku wajahan Guriceel oo gaabis uu ka muuqdo
Gulufka ku wajahan Guriceel oo gaabis uu ka muuqdo
Hal toddobaad ayaa laga jooggaa, tan iyo markii Ciidamada Dowladda iyo kuwa Galmudug ay bilaabeen inay u jiheystaan dhinaca Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud.
Hawlgalka ciidamada oo gaabis badan uu ka muuqanayo ayaa loo aaneynayaa, iyadoo Xoogaga Ahlu Sunna la tuhunsan yahay inay ka ag-dhow yihiin goobaha ay ciidamada ku safrayaan.
“Inkastoo hadda waqti kooban ay tahay waqtiga waxbarashada hakadka ku jirto, laakiin midda walwalka nagu haysaa waxay tahay waqtiga ay dhammaanayso colaaddaan ayaynaan garanayn.” Ayuu yiri Cabdulqaadir Jaamac Tarabi oo la hadlay BBC.
Khubarada dhinaca amniga ayaa sheegaya, haddii aan laga baaqsan dagaalkan in uu galaafan doono nolosha dad badan. Khubarada ayaa ku talin lahaa in Galmudug iyo Ahlu Sunna iska kaashadaan la dagaalanka Shabaab, bedelkii ay dhexdooda dagaalami lahaayen.
Maleeshiyada Shabaabka ayaa weli Gobolada Dhexe kaga sugan deegaanadii ay horey ugala wareegeen Galmudug.
Previous articleXaaji Suudi Yalaxow oo galabta lagu aasay Magaalada Muqdisho
Next articleMadaxweynaha Turkiga oo booqasho ku joogga dalka Togo (SAWIRRO)